consider - Synonyms of consider | Antonyms of consider | Definition of consider | Example of consider | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for consider
Top 30 analogous words or synonyms for consider
Wp:wikilinks If there isadispute on the position of an embedded link, consider organizing alphabetically.
ဂေါတမဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူဦးရေ (သန်းပေါင်း ၆၉၀၀) ကျော် ရှိသည့် အနက် ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ (သန်းပေါင်း၁၆၀၀- ၂၀၀၀) ခန့်အထိ ကိုးကွယ်ယုံကြည်သော ဘာသာတရား နှင့် အယူဝါဒဖြစ်သည်။ တရုတ်ပြည်သည်ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓဘာသာလူဦးရေ အများဆုံး နိုင်ငံလည်းဖြစ်သည်။ တရုတ်ပြည်တွင် လူဦးရေ သန်းပေါင်း ၁၄၀၀ ခန့် ရှိသည့် အနက် (သန်းပေါင်း ၁၂၀၀) ၁,၂၁၉ ,၁၄၉ ,၆၀၀ ကျော်အထိ မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်သည်။ ထို့ကြောင့် ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ မဟာယာန နှင့် ထေရဝါဒ ပေါင်းလျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ယုံကြည်သူ လူဦးရေအားဖြင့် ၁,၉၂၁ ,၉၈၉,၆၄၁ (သန်း ၁၉၀၀ ကျော်၊ သန်း ၂၀၀၀ နီးပါး) ရှိပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ဒုတိယလူဦးရေအများဆုံး ကမ္ဘာ့ဘာသာနှင့် အကြီးထွား အမြန်ဆုံးသော ဘာသာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဂေါတမ မြတ်စွာဘုရား သည် ဟိန္ဒူ ဗိဿနိုးဘုရား ဝင်စားသူ ဟု ဟိန္ဒူဘာသာ ဝင်တို့က ယုံကြည်ကြသည်။ ဂေါတမ ဗုဒ္ဓဘုရား သည် Vishnu ဘုရားဝင်စား အဖြစ် ဗုဒ္ဓဘာသာတို့က မယုံကြည်ကြပါ (Buddha is never mentioned as an avatar of Vishnu in Puranas and logically it is impossible to consider that asafact. They claim Buddha is not as avatars of Vishnu, which is not true.) ဟိန္ဒူဘာသာဝင် ၁,ဝ၈၃,၈၀ဝ,၃၅၆ (သန်း ၁၀၀၀ ကျော်) တို့က ဂေါတမဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ကို ကြည်ညို လေးစားကြသည်။(In Hindu world is signed Lord Buddha as ninth avatar of Supreme God Vishnu and Hindu accept teachings of Buddha, but do not directly worship him. ) ဟိန္ဒူဘာသာ စသော အခြားသော ဘာသာအယူဝါဒများ၊ ဖန်ဆင်းရှင် ဘုရားသခင်God တည်ရှိမှုကို အယုံအကြည် မရှိသူ ဘာသာမဲ့ (free-thinkers/ Atheists/Anti-theist/no religion person) များကပင် ဂေါတမဗုဒ္ဓ ကို တနည်းမဟုတ်တနည်းဖြင့် ကြည်ညို လေးစားကြသည်။ ဂေါတမဗုဒ္ဓဘုရား သည် ကမ္ဘာ့သမိုင်း-လူ့သမိုင်းတွင် ဩဇာအကြီးမားဆုံးသောအမြင့်မြတ်ဆုံးသော၊ထိပ်ဆုံး အဓိကပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဖြစ်သည်။